Nhau - Kwamuno shandisa epurasitiki zvikamu
Zvikamu zvepurasitiki zvinogadzirwa kuburikidza nekuumbwa kwekuumbwa nedzimwe nzira dzekugadzirisa, idzo saizi uye basa zvinosangana nezvinodiwa nevagadziri.
Kupfuura 80% yezvikamu zvepurasitiki zvakaumbwa nejekiseni jekiseni, inova ndiyo nzira huru yekuwana chaiyo epurasitiki zvikamu.
Jekiseni epurasitiki zvikamu uye zvigadzirwa zvakapinda mune ese matunhu ezviitwa zvevanhu, anoshandiswa zvakanyanya mukutaurirana kwemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, zvemagetsi, zvishandiso, chengetedzo, mota traffic, kurapwa, zvemazuva ese midziyo yehupenyu uye mimwe minda.
Iwo makuru ezvigadzirwa zvikamu ndeaya:
1. Kutaurirana zvemagetsi zvigadzirwa uye zvevatengi zvemagetsi (epurasitiki dzimba, yakakomberedzwa, bhokisi, kavha)
Nhare mbozha, mahedhifoni, materevhizheni, vhidhiyo nhare, POS michina, bhero repasuo.
2.Magetsi emagetsi (epurasitiki kesi, kavha, mudziyo, chigadziko)
Kofi inogadzira, juicer, firiji, air conditioner, fan washer uye microwave oven.
3. Zvigadzirwa zvemagetsi
Mita yemagetsi, yemagetsi bhokisi, yemagetsi kabati, frequency converter, kuputira kavha uye switch.
4. Chishandiso (dzimba dzeplastiki, chivharo)
Voltmeter, multimeter, barometer, hupenyu detector
5. Auto zvikamu
Dashboard muviri furemu, bhatiri bracket, pamberi module, control box, chigaro chekutsigira furemu, spare placenta, fender, bhamba, chassis chifukidzo, ruzha chipingamupinyi, kumashure kwemusuwo furemu
Mapurasitiki zvikamu zvemotokari
6.Traffic mudziyo nemidziyo yeMota (chivharo chemwenje, chivharo)
Signal mwenje, kusaina, doro muyedzo,
7. Kurapa uye hutano
Magetsi anoshanda, sphygmomanometer, sirinji, inodonhedza, bhodhoro remushonga, masaja, mudziyo wekubvisa bvudzi, midziyo yekusimbisa
8. Zvinodiwa zvezuva nezuva
Zvigaro zvepurasitiki, mabhurosi emazino epurasitiki, mabheseni epurasitiki, migomo yepurasitiki, mapurasitiki, makapu epurasitiki, magirazi, mabutiro echimbuzi, madziva, matoyi
Zvigadzirwa zvakasiyana zvinoda hukuru hwakasiyana, zvimiro, zvesimba, kutaridzika uye mashandisiro, saka kune akasiyana mafomu uye jekiseni kuumbwa maitiro anoshandiswa kuzviita.
Mestech ine makore anopfuura gumi ejekiseni muforoma yekugadzira uye jekiseni yekugadzira ruzivo, isu tinokwanisa kukupa iwe yakagadzirirwa jekiseni kuumbwa uye zvigadzirwa zvejekiseni uye masevhisi zvinoenderana neyako.
2. jekiseni kuumbwa kwezvikamu zvidiki, hombe zvikamu, shinda, magiya, makomba, maviri mavara, uye simbi inoisa kuumbwa.
3.Kufukidza kana kushongedza kwepamusoro: kudhinda kwechidzitiro, kupenda kupuruzira, electroplating, yekushongedza kwemukati mevhu, kudhinda kwemvura
Kana iwe uchida zvigadzirwa zvepurasitiki zvezvigadzirwa zvako, kana uchida kuziva zvakawanda, ndapota nyorera Mestech yekotesheni kana rumwe ruzivo.